Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » I-Thailand Izindaba Ezintsha » AmaSulumane aseThailand amukela abakhulekeli futhi
Amasiko • Health News • Izindaba • I-Thailand Izindaba Ezintsha • Ezokuvakasha • Izindaba Ezihlukahlukene
Ukuthandaza kuvunyelwe emasontweni aseThaialnd futhi
ISheikul Islam Office (SIO) eThailand igunyaze ukuqala kabusha kwemikhuleko emasosheni emiphakathini lapho okungenani abantu abangama-70% abaneminyaka engu-18 noma ngaphezulu begonyelwe i-COVID-19.
KunamaSulumane angaba ngu-3,500 XNUMX eThailand anenombolo enkulu kunazo zonke esifundazweni sasePattani futhi ehlotshaniswa kakhulu neSunni Islam.
Isikhathi somkhuleko ema-mosque sizokhawulelwa kwimizuzu engama-30, ngaphandle koLwesihlanu lapho abakhonzi bengathandaza imizuzu engama-45.
Izinyathelo zezempilo zomphakathi kufanele zilandelwe kufaka phakathi ukufaka isifihla-buso sobuso, ukuqhela emphakathini, nokuhlanza izandla.
I-SIO ikhiphe isitatimende ithi manje isivumela imithandazo emaSulumeni emiphakathini lapho amakomidi amaSulumane esifundazwe kanye nabaphathi bezifundazwe ngokuhlanganyela benqume ukunciphisa imingcele emisebenzini yezenkolo.
Ihhovisi lidinga ukuthi amalungu ekomidi lamaSulumane emaSulumane nabakhonzayo bagonywe okungenani kanye. Isikhathi sokuthandaza sinqunyelwe imizuzu engama-30 nemithandazo yangoLwesihlanu kungabi ngaphezu kwemizuzu engama-45.
Ngokusho the ISheikul Islam Office, ababekhona kumele bathobele ngokuqinile izindlela zezempilo zomphakathi kanye nesimemezelo se-SIO. Bayadingeka ukuthi bahlolwe izinga lokushisa lomzimba wabo ngaphambi kokungena e-mosque, bagqoke imaski yobuso, futhi bagcine ibanga elingu-1.5 kuya kwamamitha amabili phakathi komugqa ngamunye ngesikhathi sokuthandaza. Ijeli yokuhlanza izandla kufanele itholakale kalula.
Thailand inamaSulumane angama-3,494, ngokusho kweNational Statistics Office yaseThailand ngo-2007, kanti angama-636, amaningi endaweni eyodwa, esifundazweni sasePattani. Ngokusho koMnyango Wezindaba Zezenkolo (RAD), amaphesenti angama-99 ama-mosque ahlotshaniswa neSunni Islam nephesenti elilodwa elisele i-Shi'i Islam.
Abantu baseThailand abangamaSulumane bahlukahlukene, nezinhlanga ezafuduka zaze zafika eChina, ePakistan, eCambodia, eBangladesh, eMalaysia nase-Indonesia, kanye nokubandakanya ubuThais bezinhlanga, kanti cishe amaSulumane amabili kwamathathu aseThailand angamaThai Malays.
Ngokuvamile amakholwa enkolo yamaSulumane eThailand alandela amasiko namasiko athile ahlobene ne-Islam yendabuko ethonywe yiSufism. KumaSulumane aseThailand, njengama-co-coreligionist awo kwamanye amazwe amaningi anamaBuddha e-Southeast Asia, iMawlid iyisikhumbuzo esingokomfanekiso sokuba khona komlando wamaSulumane ezweni. Iphinde imele ithuba laminyaka yonke lokuqinisekisa isimo samaSulumane njengezakhamizi zaseThai kanye nokuthembeka kwabo ebukhosini.
Inkolo yamaSulumane eThailand ivame ukukhombisa izinkolelo nemikhuba yamaSufi njengakwamanye amazwe ase-Asia afana neBangladesh, India, Pakistan, Indonesia naseMalaysia. UMnyango Wezamasiko woMnyango Wezamasiko unikeza amaSulumane imiklomelo eye yanikela ekukhuthazeni nasekuthuthukiseni impilo yaseThailand ezindimeni zabo njengezakhamizi, njengabafundisi, nanjengabasebenzi bezenhlalakahle. EBangkok, umkhosi omkhulu weNgarn Mawlid Klang ungumbukiso onempilo womphakathi wamaThai wamaSulumane nezindlela zabo zokuphila.